60 askari oo laga dilay ciidammada Ciraaq - BBC Somali
60 askari oo laga dilay ciidammada Ciraaq
Image caption Kooxda Khilaafada Islaamka ayaa maalmo ka hor laga qabsaday magaalada Ramadi oo ay in muddo ah maamulayeen.
Dalka Ciraaq warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dagaalyahanada kooxda isugu yeerta Dowladda Islaamiga ah ay weerrar ku qaadeen saldhig uu leeyahay milateriga Ciraaq oo ku yaal waqooyiga magaalada Ramadi, halkaasi oo ay ku dileen lixdan askari oo ciidammada dowladda ah.
Weerrarka ayaa imanaya xilli ciidammada Ciraaq ay sii xoojinayaan gacan ku haynta magaaladaasi Ramaadi.
Waa weerrarkii ugu weynaa ee ay Kooxda Dowladda Islaamiga ah ku qaaddo ciidammada Ciraaq tan iyo horraantii todobaadka markaa oo lagu dhawaaqay in dib loo qabtay magaalada Ramaadi.
Sarkaal ka tirsan milateriga ayaa sheegay in jihaadiyiinta ay weerarkan u adeegsadeen lix baabuur oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ay xoojinayeen dagaalyahano xiran suuman laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Sarkaalka ayaa sheegay in milaterigu uu rogaal celin sameeyay iyagoo gacan ka helaya duqeymaha cirka ee ay gaysanayaan isbahaysiga.
Weerrarka ayaa muujinaya xajmiga weerrarada ka dhanka ah ciidammada dowladda.
Xitaa gudaha Ramaadi, ciidammada ayaa waxa ay iska hor imaadeen tira aan la garanayn oo ka tirsan dagaalyahanada Kooxda Dowladda Islaamiga ah oo weli haysta daafaha magaalada.
Guusha ay dowladdu gaartay ayaa loo arkayay mid aad muhiim u ah, hasayeeshee in laga guulaysto koox sida Dowladda Islaamiga ah ayaa u baahan wax ka badan in dagaal un looga guulaysto.